Fitakiana fitsaram-bahoaka, rotaka tany Vangaindrano : dimy lahy naiditra am-ponja any Farafangana sy Fianarantsoa | NewsMada
Fitakiana fitsaram-bahoaka, rotaka tany Vangaindrano : dimy lahy naiditra am-ponja any Farafangana sy Fianarantsoa
Any Farafangana no naiditra am-ponja ilay tovolahy, voarohirohy ho namono nahafaty ilay tovovavy, fototry ny savorovoro tany Vangaindrano, raha any amin’ny fonjan’i Fianarantsoa kosa no nitanana ireo efa-dahy voarohirohy ho nitarika ny fihetsiketsehana tamin’ny fandrobana sy doro trano. Omaly no nanolorana azy ireo teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana.
Natolotra ny fampanoavana omaly ireo olona dimy voasaringotra tamin’ilay savorovoro tany Vangaindrano ny herinandro teo. Lehilahy iray voampanga ho namono ilay tovovavy 19 taona tany Lopary natolotra ny fampanoavana tany Fianarantsoa, omaly maraina ary naiditra am-ponja vonjimaika. Efa-dahy kosa natolotra ny fampanoavana tany Farafangana, voampanga ho nanakorontana sy nandoro trano ary nanimba fananan’olona. Tany Farafangana ireto noho izany no naiditra am-ponja vonjimaika.
Araka izany, na tany Fianarantsoa aza no nitondrana ireo olona voasambotra rehetra ireo, nisy ihany ny nalefa tany Farafangana. Tsy nisy ny olana tamin’ny fanolorana ny fampanoavana ireo olona ireo. Efa tsara ambin’ny zandary sy ny Gsis rahateo ireo voarohirohy ka nandeha tamim-pilaminana izany. Nentina niala lavitra an’i Vangaindrano rahateo izy rehetra.
Ilay voampanga na ho namono ilay tovovavy 19 iray ihany, araka ny fanazavana fa tsy olona telo. Ireo voarohirohy ho nandoro trano sy nitarika korontana kosa, voalaza fa nisy mpiasan’ny senatera tany an-toerana, ary izy io mihitsy no voatondro ho nitarika ireo mpanao fihetsiketsehana.
Raha tsiahivina, niaingana tamin’ny fahafatesana vehivavy 19 taona ny raharaha tany Vangaindrano. Voalaza tamin’izany fa lehilahy telo namono nahafaty azy ary efa voasambotry ny zandary ireo. Notanana tao amin’ny borigady tany an-toerana ireo ary nangatahin’ny olona fitsaram-bahoaka. Niitatra ny raharaha ary niafara tamin’ireny fandoroana trano sy korontana ireny. Taorian’izay nahatongavan’ny FIGN, Gsis sy ny miaramila ary nisy ireo voasambotra.
Raha ny fanazavana azo ihany, ireo olona natolotra ny fampanoavana ireo ihany no nosamborina hatreto ary tsy nisy intsony. Mbola rakotra mpitandro filaminana ny any Vangaindrano, ary efa miverina amin’ny laoniny ny filaminana, raha ny vaovao voaray. Mbola mipetraka ihany anefa ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina any an-toerana.
Tsy nahazoam-baovao ireo mpiray dina, izay anisan’ny nitaky ny fitsaram-bahoaka. Ity raharaha ity izay ilana vahaolana amin’ny mpitondra amin’ny fametrahana tany tan-dalàna. Ny fitondrana amin’ny alalan’ny fitsarana mametraka ny lalàna sa ny fiaraha-monina amin’ny alalàn’ny dina? Mbola ady hevitra be.